Ku Saabsan Aasaasihii - Chengdu Xinzi Rain Clothing Dharka CO., Ltd.
Waxay waligeed jeclayd kabaha, waxayna rajaynaysaa in dumarka oo dhami ay xidhan karaan kabaha dhaadheer ee naftooda ku habboon oo siin kara xoog badan. Waxaa la aasaasay astaanta naqshadeynta kabaha madaxbannaan 1998, inta badan waxay diiradda saareysay sidii loo samayn lahaa kabaha haweenka ee casriga ah oo raaxo iyo moodba leh. Waxayna isku dayayeen inay jebiyaan jadwalka iyo dib -u -qeexidda. Helitaanka haweenku inay xidhaan cidhibhooda dhaadheer hadda ma aha hawl adag. Oo aad xidhato kabaha cidhibta dhaadheer ee aan la taaban karin, tag meesha ay rajaynayaan inay tagaan.
Si kastaba ha noqotee, sannado badan oo waayo -aragnimo dhar -xidhasho ah ayaa ka tagtay iyada oo leh rabitaan xooggan oo ah haweenku inay jebiyaan caadadooda, xitaa waxay ku fikirtay fikradda ah "Nafta Loogu Talagalay" si ay u ogaato in haweeney kasta ay u qalanto nigiskeeda gaarka ah. Waxaa ka buuxa tamar, galmo, soo jiidasho, waa muujinta kale ee quruxda dumarka.
Waxay had iyo jeer rumeysan tahay in galmadu aysan ahayn kaliya raaligelinta dadka kale, laakiin sidoo kale ay ku saabsan tahay xorriyadda. Markaa wuxuu bilaabay inuu abuuro astaan ​​u gaar ah 2004tii, sidaasna, waxaa jiri doona mas'uuliyad adag, hawl qaadasho iyo meel fog, aragtida macaamiisha marka hore, iyo mas'uuliyadda ah inay si joogto ah u dhegeystaan ​​una daboolaan baahida macmiilka. Astaanta ayaa soo martay 17 sano oo ay hoggaaminaysay.
Baadhitaan iyo tijaabin joogto ah ka dib, waxay si wada jir ah aqoonsi iyo ammaan uga heshay macaamiisha noocyada soo socda, sida Sexy Lingerie, Sportswear, and Seamless Bra & Bets Sets. Caqiidadeeda, haweeney kasta, iyadoon loo eegin da'da, shaqada, iyo tirada, waxay mudan yihiin nigiskooda gaarka ah.
Roobka Xinzi wuxuu gaaray guulo waawayn sababtoo ah waayo -aragnimadiisa xirashada aadka u raaxada leh iyo naqshadeynta moodada ah. Sumcadeeda ayaa sidoo kale bilaabatay inay wareegto, waxaana si waalli ah u jecel haween badan oo madax bannaan.
Riyada ugu dambaysa ayaa ah inay awood u keento haweeney kasta oo xirta nigiskooda Xinzi Yu, inay si joogto ah u jabiso oo u beddesho awooddeeda, si ay u dhammaystirto riyadooda awooddan, oo ay hore ugu socoto si aan kala sooc lahayn oo jaceyl ah ...